DISTRIKA ISANDRA : Entanina hanao fanatanjahan-tena ny tanora Malagasy
Efa voalaza ombieny ombieny fa ny tanora no maro an’isa amin’ny Malagasy. Araka izany dia ilaina ny mihevitra azy ireny mba ho tonga tosika ho an’ny fampandrosoana fa tsy ho lasa vesatra ho an’ny firenena indray. 29 novembre 2017
Fantatra mantsy fa ny tsy fahampian’ny fialamboly no isan’ny mitarika ny tanora hivarilavo amin’ny rendrarendra samihafa, ao anatin’izany ny fifohana zava-mahadomelina sy fisotroana ka miafara amin’ny fanaovana asa ratsy. Zava-misy mateti-pitranga eny amin’ny tontolo ambanivohitra ny tahaka izany, eny fa na dia eny amin’ny tontolo an-drenivohitra aza.
Amin’izao fotoana izao dia jerena manokana ary beazina tsy hirona amin’izany ny tanoran’Isandra, hoy ny olom-boafidy avy any amin’iny distrika iny. Ilaina araka izany ny fitadiavana hetsika mba hahafahana mitazona ireo tanora tsy hirona amin’ny zava-dratsy. Isan’izany , ohatra, ny fanentanana azy ireo hiditra amin’ny fanaovana sy fitiavana fanatanjahantena. Misy araka izany ny fanatanterahana lalao baolina kitra izay efa fanao isaky ny faran’ny taona toy izao.
Lalao izay hifanandrinan’ireo fokontany samihafa mandrafitra ny kaominina tsirairay any amin’ny distrikan’Isandra. Ny faran’ny herinandro teo no nanombohana izany « Tournoi » izany ka tao amin’ny kaominina Nasandratrony no nisantarana azy. Ekipa 16 avy ao amin’ny fokontany valo misy ao amin’ity kaominina ambanivohitra ity no mandray anjara amin’izany. Fantatra fa samy notolorana fanamiana mitovy sy baolina iray avy ireo nandray anjara mba ho fanomezana tosika azy ireo irona bebe kokoa hatrany amin’ny fankafizana izay fanatanjahan-tena izay. Omby iray no amboara atolotra ny ekipa mivoaka ho mpandresy amin’izany lalao baolina kitra izany. Marihana fa any akaikin’ny fetin’ny Noely vao hifarana ny « tournoi ».